Bhuku "YeBrazil Clichés" yakaumbwa ichishandisa mifananidzo kubva yekare yekodhi yeBrazil mavara mavara epichés. Asi chikonzero chezita rayo hachisi chete nekuda kwema clichés anoshandiswa pakuumbwa kwemifananidzo yavo. Pane imwe neimwe peji peji, tinomhanya mune mamwe marudzi emuBrazil ma clichés: ezvakaitika kare, sekusvika kwePutukezi, katekisheni yevagari vekuIndia, kofi uye goridhe hupfumi kutenderera ... inosanganisirawo yemazuva ano maBrazil clichés, azere nemafafitera emagetsi, zvikwereti, yakavharwa makondomu uye kuparadzaniswa - Inoratidzwa mune isingaremekedzwa yemazuva ano inoonekwa nhoroondo.
Kalendari Shamba ipepa kitset pepa rekarenda. Yakanyatso sunganidzwa inoita inonakidza miniature kupurazi yakazara nematanhatu mhuka dzakasiyana.
Tafura Yekupinda ORGANICA Fabrizio's huzivi hunoratidzwa chero hwehurongwa hwepanyama umo zvikamu zvese zvakabatana kuti zvipe kuvapo. Dhizaini iyi yaive yakavakirwa pakuoma kwemuviri wemunhu uye kwepamberi pekufunga kwemunhu. Iye anoona ari kutungamira murwendo rune mutserendende. Musuwo werwendo urwu pane maviri mafomu akakurisa anoonekwa semapapu, ipapo chigaro chealuminium chine zvibatanidza chakafanana nemuzongoza. Iye anotarisa anogona kuwana tsvimbo dzakamonyana dzinoita senge artery, chimiro chinogona kududzirwa sechinhu uye chekupedzisira igirazi rakanaka re template, yakasimba asi isina kusimba, kufanana neganda remunhu.
Kalendari Iyo Murimi ndeye kitset pepa remhuka kalendari. Yakanyatso sunganidzwa inoita inonakidza miniature kupurazi yakazara nematanhatu mhuka dzakasiyana. Hupenyu neKugadzira: Zvemhando zvigadzirwa zvine simba rekugadzirisa nzvimbo uye kushandura pfungwa dzevashandisi vayo. Vanopa kunyaradza kwekuona, kubata uye kushandisa. Ivo vanozadzwa neakareruka uye chinhu chekushamisika, inovandudza nzvimbo. Zvigadzirwa zvedu zvepakutanga zvakagadzirwa zvichishandisa pfungwa ye "Hupenyu neKugadzira".
Bhuku Organic Oiri Maorivhi Kalendari Kalendari Tafura Yekupinda Kalendari